Guriga - Ku Soo Dhawoow Shaybaarka Cilmiga Bayoloji ee Genimal
Raadi baaritaanka DNA. Nooca tusaale galmada galmada
Raadi macluumaad. Ku qor tusaale ahaan suufka buccal
Raac ama hel natiijo. Nooca tusaale 250256
Eeg dhammaan tijaabooyinka DNA Baaritaanka DNA ee shimbiraha
Ku soo dhawoow GENIMAL
Waxaan bixinnaa xal cusub oo tijaabo DNA ah oo loogu talagalay adeegga taranka. Waxaan hubin doonaa inaad mar walba hesho Natiijooyinka ugu fiican. Waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxaysato inaad na siiso baaritaanka DNA-gaaga.
Dalbo Tijaabooyin DNA
Lasoco Baaritaanka DNA-da
Adeegyada cajiibka ah
Tayo aan isbarbar dhigin
Muhiimadayadayadu waa inaan bixino adeeg aan la mid ahayn, oo heer sare ah. Iyada oo si toos ah u socota socodka shaqada, Genimal waxa uu si adag uga feejigan yahay bixinta natiijooyinka ugu saxsan uguna saxsan ee suurtogalka ah iyadoo ay ugu wacan tahay hababkeeda casriga ah.
Thanks to our robots falanqaynta iswada, waxaan ku soo bandhignaa natiijooyinka a waqti aad u gaaban.
Cudurka faafa : 1-3 maalmood
Cudurka hidde-sideyaasha, Colotest: 1-6 maalmood
Galmada DNA: 1-3 maalmood.
Qiimaha ugu Wanaagsan
Waxaan ku dadaaleynaa inaan ku siino waxyaabaha qiimaha ugu fiican shay kasta oo DNA ah. Wixii taranka ama qadar badan oo falanqayn ah, waxaanu bixinaa xigasho.
Sug shahaadada DNA
Dhammaan shahaadooyinka DNA-dayadu waxay wataan koodka caddaynta fara-gelinta ah.
Bixinta 3X bilaash ah
Bixinta 3x bilaasha ah waxay ku ansaxaysaa iibsi kasta oo ah 79 €.
Dabagalka ugu fiican
Iimayl toos ah marka la helo muunadaada La socodka wakhtiga dhabta ah ee horumarka falanqayntaada. Helitaanka joogtada ah ee shahaadooyinkaaga DNA-ga.
Ku dhawaad ​​dhammaan imtixaanadayada waxa lagu heli karaa ikhtiyaarka cad. Markaan mudnaanta siinayno falanqayntaada, waxaanu kuu dammaanad qaadaynaa daahitaanka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah
Ku soo deji natiijooyinka falanqayntaada in ka badan 117 luqadood si aad u fududayso iswaydaarsiga wadamada dhexdooda.
Dalbo xidhmo shaybaadh DNA ah hadda si aad u hesho qiimo ka wanaagsan ka dibna u soo dir muunadaada wakhtiyo kala duwan gudaha xadka 2 sano. Tusaale ahaan, waxaad soo diri kartaa 2 muunado berrito, 3 kale laba bilood gudahood iwm.
Waxaan rabaa inaan dalbado baaritaanka DNA-gayga
Tijaabooyinkeena DNA ee ugu dambeeyay ee la sameeyay
LPN2 Polyneuropathy nooca 2 ee Leonberger
Tijaabada DNA-da cusub: LEMP ee Leonberger
Tijaabada DNA-da cusub: IMM ee Horse Quarter
Sida waxa aad aragto?
Lasoco warar dheeri ah
Tijaabooyin DNA ah oo la heli karo
Tijaabooyin DNA ah oo la sameeyay
Kala duwanaanshahayaga daboolka
Luuqadaha la heli karo
Soo ogow horumarka dhabta ah ee baaritaanka DNA-da
Socodkeena shaqadu waa mid aad u fudud…
Dalbo baaritaanka DNA-ga oo diwaangeli xoolahaaga
Waxaan kuu soo diri doonaa xirmadaada aruurinta ama xaalada qaar waxaad isticmaali kartaa kaaga.
Sambalkaaga soo qaado oo u dir shaybaadhkayaga
Si degdeg ah u hel natiijadaada by iimaylka, boostada, SMS iwm.
Soo hel maqaalkan faahfaahsan oo ku saabsan heerarka kala duwan ee dalabka.
Ku qor aad email
Fadlan qor aad email
cinwaanka email Tani waa sax ahayn
Waxaan si wanaagsan aad ka diiwaan gashan in our Warside
Waxaad horay heshiiska to our Warside
La soco wararka ugu dambeeya
Laguu ogeysiiyo tijaabooyinka ugu dambeeyay ee DNA ee la sameeyay
In lagu wargeliyo oo ku saabsan dalabyo xayaysiis
Ka qaybqaado barnaamijka cilmi our
Tayadu waa mudnaantayada
Shaqaalaheena aadka u tababaran waxay isticmaalaan tignoolajiyada qarniga 21aad ee ugu horumarsan si ay u daboolaan baahiyaha gaarka ah ee baaritaan kasta oo DNA ah.
Genimal Biotechnlologies waxay si joogto ah u maalgalisay mustaqbalka baaritaanka DNAda iyagoo iibsanaya qalab-goyn. Waxaan isticmaalnaa robots noole oo toos ah kuwaas oo bixiya adeegyo aad u fiican iyo natiijooyin sax ah oo sax ah dhammaan baaritaanka DNA-da ee aan sameyno.
Genimal Biotechnologies waxa ay leedahay in ka badan 10000 macaamiil iyo dhakhaatiirta xoolaha ee aduunka oo dhan kuwaas oo nala shaqaynaya kuwaas oo aanu siinayno adeega ugu wanagsan iyo shakhsi ahaaneed.
Nagu soo biir !
Genimal wuxuu si firfircoon uga qayb qaataa horumarinta shaybaarada DNA-da cusub, oo inta badan ku jira berrinka cudurrada hidda-socodka ee eeyaha, bisadaha iyo fardaha.
Nidaamyada saaxiibtinimo ee Eco
Genimal waxaa ka go'an inuu horumariyo hab-maamuusyo cusub oo ixtiraam badan u leh deegaanka. Ethidium bromide ( wasakhda aashitada nukliyeerka) ayaa looga tagay iyada oo door bideysa alaabada aan sunta ahayn. Badeecadaha falcelinta ayaa kala badh hoos u dhacay 10 sano gudahood.
Jiilka soo socda hab
Dhammaan borotokoolladayada baaritaanka DNA-da ayaa si tartiib tartiib ah u soo hagaagaya hababka jiilka cusub ee dammaanad qaadaya natiijooyin la isku halayn karo oo degdeg ah (badanaa 1 maalin).
Genimal wuxuu ku lug leeyahay barnaamijyada cilmi-baarista ee ilaalinta duur-joogta iyo deegaankooda. Waxaan la shaqaynaa ONCFS oo la kaashanayna barnaamijyo kala duwan iyo xadiiqooyinka xayawaanka.
Waad ku mahadsan tahay tignoolajiyada cusub, GENIMAL ayaa horumarisay EXPRESS doorasho. Waa doorasho degdeg ah oo cajiib ah oo dammaanad qaadka natiijooyinka wakhtiga ugu yar ee suurtogalka ah.
Cudurka faafa 24h
Cudurka hidda-socodka iyo baaritaanka midabka 72h
Jiilka soo socda ee borotokoolka Express ayaa ku soo socda oo inta badan cudurka hidde-sideyaasha waxa la heli doonaa 24 saac mustaqbalka dhow.
Raadinta waqtiga dhabta ah ee baaritaanka DNA
Had iyo jeer ogow halka ay marayso falanqaynteeda.
Aad nidaamka raadraaca
Isku xirka baaritaanka DNA iyo amniga
Dhammaan shahaadooyinka DNA-da waxay leeyihiin a Numberka Sirta. Koodhkani waa mid aan xad lahayn.
Websaydhkeena si buuxda buu ammaan u yahay, gelitaanka dhammaan xogtaadana waa la ilaaliyaa.
Macaamiisheenna Waxay Nooga Yiraahdeen
Home Guud ahaan qiimeynta: ★★★★★ 4.9 ku saleysan 150 dib u eegista.
Dhammaan Xuquuqda Aad ayaa loo Xantaayaa, GENIMAL Biotechnologies© 2022